အမှတ်မထင် လွတ်ကျခဲ့တဲ့ နှလုံးသားအပိုင်းအစများ စုစည်းရာ: August 2008
ရင်ခတ်နွယ်နှင့် မြစ်ကောက် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်သည်နှင့် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အပြိုင်အဆိုင် ကြွားတတ်ပါသည်။မကြွားရလျင်လည်း အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အစဆွဲကာ ငြင်းခုန်နေတတ်ကြသည်။တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အတင်စီးမခံပဲအမြဲ အပြိုင်အဆိုင်အလုပ်တတ်ကြသည်။
မြစ်ကောက်သည် စကားမရှိစကားရှာကာ ကျွန်တော်ကိုလာကြွားနေသည် ...ဟေ့ကောင် ရင်ခတ် မင်း လမ်းထိပ်က ဒေါ်သန်းတို့ အိမ်ကိုရောက်နေတဲ့ ဒေါ်သန်းတူမ ကောင်မလေး ကိုသိလား?ရောက်တာမကြာသေးဘူး ချောတော့တော်တော်ချောတယ် ငါဒေါ်သန်းတို့အိမ်ရှေ့ရောက်တိုင်း ကောင်မလေးက ငါ့ကိုခိုးခိုးကြည့်တယ်ကွ ကောင်မလေးကြည့်ရတာ ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ထင်တယ် မင်းသိပါတယ်ရင်ခတ်ရာ ....၊မဆီမဆိုင် ကျွန်တော်ကပဲ သိရအုံးမယ်..အမြင်ကတ်လာသဖြင့်....
ဟ....ငါကဘာလို့သိရမှာလည်း သိရအောင်မင်းကိုပဲ လိုက်ကြည့်နေရမှာလား..? ဟုတ်မှလည်းလုပ်ပါ မြစ်ကောက်ရာ ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လား..?ဟုတ်တာမှသိပ်ဟုတ် ဟုတ်..ဟုတ် လို့တောင် မြည်နေသေးတယ် ရင်ခတ်ရာ ၊ မြစ်ကောက်ပါကွ တစ်မြစ်ပဲရှိတယ် မဟုတ်ရင် နို့ဆီခွက်တောင်ထုပြီးမရောင်းစားဘူး။
ကျွန်တော်က မင်းကောင်မလေးကိုသေချာ ကြည့်ပြီးလို့လား မြစ်ကောက်ရာ....သေချာရော မြင်ဖူးလို့လား..?မမြင်ဖူးပဲ နဲ့လာပြီးလျောက်ပြောမနေနဲ့...ထင်တာတွေလာပြောမနေဲ့ ငါတော့ အဲ့ဒီကောင်မလေးကို သေချာမြင်ဖူးတယ် မြစ်ကောက်ရ ငါဒေါ်သန်းတို့ အိမ်ရှေ့ရောက်တုန်းက ဒေါ်သန်းက ငါ့ကိုခေါ်ပြီး ကိုခတ်ရေ လာပါဦး ဒါအန်တီတူမလေး ဖြူဖြူပါ ရန်ကုန်ကိုကျောင်းတတ်ဖို့ တောင်သာကနေလာတာ ကိုခတ်လည်း မောင်နှစ်မလို သဘောထားပြီး အကူအညီလိုတာရှိရင် မင်းညီမကိုကူညီလိုက်ပါဦး ဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းက ငါကောင်မလေးကို သေချာကြည့်မိလိုက်တယ် ကောင်မလေးက မင်းထင်သလို မင်းကိုခိုးခိုးပြီး ကြည့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ မသိမသာလေး မျက်စိစွေနေတာကွ မျက်စိစွေနေတာလေ ဒါကြောင့်မင်းကိုခိုးခိုးကြည့်တယ်လို့ မင်းထင်နေတာနေမှာပါ....။
မြစ်ကောက်သည် ပေါင်ချိန်လို မျက်နှာမဲကြီးနှင့် အေး... ထားပါတော့ ရင်ခတ်ရာ..ထားလိုက်ပါတော့ ဒါနဲ့.. စကားမစပ် မင်းကိုငါမေးစရာရှိတယ် မေးလို့ရမလား..? ကျွန်တော်ကလည်း ပညာရှိကုန်းစွန်းလို မရှိတဲ့မုတ်ဆိတ်မွှေးကို လက်နှင့်အောက်ကိုသပ်ချရင်း မေးပါ ကြိုက်တာသာမေး ဖြေနိုင်တာဆို ငါဖြေမှာပေါ့...။ ငခတ်မင်းကို ဟိုဖက်လမ်းက ဦးဘစိန်သမီး သီတာမြင့်က ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညက မင်းကိုသူတို့ နောက်ဖေးလမ်းမှာ ချိန်းတွေ့တယ်ဆို ကျွန်တော်ကလည်း အိုင်တင်တောင်မခံပဲ ဟုတ်တာပေါ့ ငါတောင အတော်အရဲစွန့်ပြီးသွားတွေ့ လိုက်ရသေးတယ် ရင်တော့တော်တော်လေးခုန်ဖို့ကောင်းတယ် ၊မြစ်ကောက်က ကျွန်တော်ကိုသေချာကြည့်ကာ အံ့သြသည့်ပုံစံဖြင့် အော်...ဒါကြောင့်မနေ့က ဟိုဖက်လမ်းမှာ ပြောနေကြတာ ငါကြားတာကို.. ကျွန်တော်က ဘာပြောနေကြလို့လည်း မြစ်ကောက်ရ.....?ငါ့ကိုလည်းပြောပြစမ်းပါဦး..။
မနေ့က ငါဟိုဖက်လမ်းထဲရောက်တုန်းက မိန်းမတွေပြောနေကြတာလေ နောက်ဖေးလမ်းကြားထဲ ပလပ်စတစ်ကောက်တဲ့ သူတွေမလာပဲနဲ့ လှန်းထားတဲ့ ထမီတွေ တော်တော်လေးပျောက်သွားတယ်လို့ ပြောနေကြတယ်...ဟုပြောပြီး မြစ်ကောက်သည် ထွက်သွားပါတော့သည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် မြစ်ကောက်သည် ရင်ခတ် ငါအပြင်သွားမလို့ ဘာမှာဦးမလည်း...?ကျွန်တော်ကလည်းအမှတ်မရှိပဲ ဘယ်သွားမလို့လည်း မမှာတော့ပါဘူးဟုပြောမိသည် မမှာရင်လည်းပြီးရော ကောင်မလေးနဲ့ချိန်းထားလို့လေ လျောက်လည်မလို့ ပြန်လာမှပဲ ပြောပြတော့မယ်ကွာ ငါ့ကောင်မလေးနဲ့လျောက်လည်တာတွေကို။
ရင်ခတ် မင်းလည်း အ၀တ်အစားသစ်တွေနဲ့ ဘယ်သွားမလို့လည်း..? ငါလည်းကောင်မလေးနဲ့ လျောက်လည်မလို့လေ မင်းမှကောင်မလေးရှိတာမဟုတ်ပါဘူး မြစ်ကောက်ရာ ငါလည်းရှိပါတယ်ကွ ..ဟဲ..ဟဲ..။မြစ်ကောက်သည် ရှိရင်လည်းသွားကွာ ငါလည်းသွားပြီရင်ခတ်ရေ ပြန်လာမှပဲ မင်းကိုကြွားတော့မယ်ဟုပြောကာထွက်သွားပါတော့သည်။
ညနေထမင်းဝိုင်းတွင် မြစ်ကောက်က ရင်ခတ် ငါဒီနေ့ကောင်မလေးနဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာကွ ဒီတစ်ပတ်အသစ်တင်တဲ့ သရဲကားလေ ကောင်မလေးကြောက်မှန်းသိလို့ တမင်ဝင်ကြည့်လိုက်တာကွ...မြစ်ကောက်ပဲလေ ဘာရမလည်း (သူဘာရလည်းကျွန်တော်တစ်ကယ်မသိပါ)ကောင်မလေးကိုမကြောက်ဖို့တောင် အားပေးလိုက်သေးတယ်...။မင်းရော ဘယ်သွားတာလည်း ရင်ခတ်..?ကျွန်တော်က ငါလည်း ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာပဲလေ ကောင်မလေးနဲ့ ဒီတစ်ပတ်တင်တဲ့ သရဲကားအသစ်ပဲလေ သမတ္တရုပ်ရှင်ရုံမှာ ...မင်းရော ဘယ်ရုံမှာကြည့်တာလည်း မြစ်ကောက်ရ ...?ငါတို့ကရှေ့ဆောင်ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ရင်ခတ်ရ ...သရဲကားက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး အရမ်းခြောက်တာ တော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ခြောက်လိုက်တာလည်း လွန်ပါရော...။
ကျွန်တော်ကမဆီမဆိုင် အားအားယားယား သွားမေးမိသည်..။ မြစ်ကောက် မင်းသရဲကြောက်တတ်လာ..? ကျွန်တော်ကမေးသည်ကို မြစ်ကောက်က ဘာလို့ကြောက်ရမှာလည်းကွ ကောင်မလေးကကြောက်လို့တောင် ငါသူ့လက်ကို ကိုင်ပြီးမကြောက်ဖို့အားပေးနေရတာဟု မြစ်ကောက်က သူ့ကိုသူ တရုတ်သိုင်းကားမှ သူရဲကောင်း လေသံနှင့် ပြန်ပြောပါသည်။ဒါနဲ့ ရင်ခတ် မင်းရော သရဲကြောက်တတ်လား...? မြစ်ကောက်က ကျွန်တော်ကိုမေးလာသည့်အခါ...
ကျွန်တော်က ကြောက်တာပေါ့ မြစ်ကောက်ရ ငါကသရဲဆိုအရမ်းကြောက်တတ်တာ...ဘာကြောက်စရာလိုလည်းရင်ခတ်ရ မင်းကယောက်ကျားလေးပဲ တစ်ကယ်ဆိုမင်းမကြောက်သင့်ဘူးကွ မင်းကောင်မလေးက မင်းကိုဘယ်လိုအားကိုးမှာလည်း...?ဆရာကြီး ပဲဟင်းရောင်းသည့်လေသံနှင့်ဆရာလုပ်ပါတော့သည် ။
ဟာ...ယောက်ကျားက ယောက်ကျားပဲ မြစ်ကောက်ရ သရဲကြောက်တာက ကြောက်တာပဲ သရဲဆို ငါက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အရမ်းကြောက်တာ ဒီနေ့တောင် ကောင်မလေးနဲ့သရဲကားကြည့်တာ ငါကြောက်လွန်းလို့ ရုပ်ရှင်စပြကတည်းက သရဲကားက စခြောက်တာနဲ့ ငါလည်းကြောက်လွန်းလို့တုန်ပြီး ကောင်မလေးပခုံးကိုဖက် ခေါင်းငုံ့ပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲဝင်နေလိုက်တယ် ရုပ်ရှင်တာပြီးသွားတယ် သရဲကား ဘာမှန်းတောင် မသိလိုက်ပါဘူး မြစ်ကောက်ရာ..။ ကျွန်တော်စကား မဆုံးသေး....
မြစ်ကောက်သည်ထိုင်နေရာမှ ၀ုန်း...ခနဲထရပ်ကာ တောက်...တစ်ချက် ပြင်းပြင်းခေါက်ပြီး ငါသရဲမကြောက်မိတာနာတယ်ကွာ...နာတယ်...အရမ်းနာတယ်ဟေ့...
နောက်ဆိုငါသရဲကြောက်တော့မယ်ကွာ..သရဲဆိုတာတစ်ကယ်တော့ ကြောက်ဖို့သင့်တယ်၊ သရဲကြောက်တတ်တော့မယ် သရဲကြောက်တော့မယ်ဟု တတွတ်တွတ်ရေရွတ်ရင်း အခန်းအပြင်သို့ ထွက်သွားတော့သည်....။မြစ်ကောက်ဘာဖြစ်သွားသည်ဆိုတာကို ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ပါ ကျွန်တော် အတွေးများစွာဖြင့် သရဲကြောက်သည်ကိုပြန်စဉ်းစားနေမိသည် ကျွန်တော် ရိုးသားစွာသရဲ ကြောက်တတ်မိခဲ့ပါသည်။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 10:55 PM4comments:
ရန်ကုန်-မန္တလေးသွား ရထားခရီးစဉ်တွင် ရထားပေါ်သို့ ဈေးတက်ရောင်းသည့် ဈေးသည်များစွာရှိပါသည်။အချိုရည်ပုလင်း၊ထမင်းထုပ်၊အကြော်၊ပြောင်းဖူးပြုတ် အမျိုးအစားစုံလင်စွာ ရောင်းချတတ်ပါသည်။ရထားရပ်သည့် ဘူတာတွင် ဆင်း၍၀ယ်စားရန် အချိန်မလုံလောက်သဖြင့် သူတို့ထံမှ ၀ယ်စားရသည်မှာ ပိုအဆင်ပြေတတ်ပါသည်။ထိုသို့ ရောင်းချတတ်သူများထဲမှ သာစည်ဘူတာမှ မန္တလေးဘူတာ အထိ အမြဲတမ်း အကြော်လိုက်ရောင်းသည့် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိပါသည်။
ထိုအကြော်သည် ကောင်မလေးသည် အကြော်ရောင်းသည့်အခါ အခြားဈေးသည် များနှင့်မတူပဲ ထူးထူးခြားခြား အာမခံကာ သူမ၏ အကြော်များကို အော်ရောင်းတတ်ပါသည်။သူမသည် အသံလွင်လွင်လေးနှင့် မျက်နှာလေးပြုံးကာ "အကြော်တွေရမယ် အကြော်စုံတွေ ကြွပ်တယ်၊ ရွတယ်နော် စားကြည့်ပါရှင် မကြွပ်လို့ကတော့ ပါးကိုသာရိုက် "ဟု အာမခံကာ အော်ရောင်းတတ်ပါသည်။
တစ်နေ့တွင် ခရီးသွား ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်သည် အကြော်သည် ကောင်မလေးကိုခေါ်ကာ အကြော်များကို ၀ယ်စားပါသည်၊အကြော်သည်ကောင်မလေးသည် ဦးလေးကြီးကို အကြော်များ ရောင်းချပြီးသည့်အခ့ါ ၊အကြော်များကို ဆက်ရောင်းရန် ရှေ့သို့ဆက်သွားသည့် အချိန်တွင် ဦးလေးကြီးသည် အကြော်တွေကလည်း ပြောသလို၊အာမခံသလို မကြွပ်ရွပါလားဟု ပြောမိသည်။ထိုအခါ ရထားတွဲပေါ်မှ ခရီးသည်များသည် အကြော်သည် ကောင်မလေး ဘာများပြန်ပြောမလည်း ဆိုတာကို သိချင်သောကြောင့် အကြော်သည်ကောင်မလေးကို ၀ိုင်း၍ကြည့်ကြပါသည်။
ထိုအခါ အကြော်သည်ကောင်မလေးသည် နောက်သို့လှည်ပင်မကြည့်ပဲ အကြော်အော်ရောင်းနေရာမှ......"အကြော်တွေရမယ် အကြော်စုံတွေ ကြွပ်တယ်၊ရွတယ်နော် စားကြည့်ပါရှင် မကြွပ်လို့ကတော့ အားမနာနဲ့ ပါးကိုသာခေါ်ရိုက်" " ကြော်တဲ့သူကို " လို့အော်ကာ ရှေ့သို့ဆက်သွားပါတော့သည်။
(ရထားပေါ်တွင် ဈေးရောင်းသည့် ခင်မင်ခဲ့ရသော အစ်မ အမာ သို့ သတိရခြင်းများစွာ ဖြင့် ခံစားရေးဖွဲ့သည်။)
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 11:09 PM 1 comment:
စာမေရေးဖြစ်တာ အတော်ကြာပါပြီ စိတ်နှင့်လူက တစ်သားတည်းမကျတာကြောင့် စာမရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး စာရေးဖို့ကြိုးစားတိုင်း ဘာတစ်ခုမှ မဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့လည်းသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ချက်တင်းအကြောင်းပြောရင်း မထင်မှတ်ပဲ ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ....။
ကျွန်တော် အင်တာနက်အသုံးပြုချိန်များတွင် အရမ်းခင်မင်ရသော သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနှင့် ဘလောစ့်ဂါမောင်နှမတွေ အတွက် ကျွန်တော် ဂျီမေးလ်ကို ဖွင့်ထားတတ်ပါသည်။တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော် လုံးဝမသိသောမေးလ်များ လာအက်လျှင်လည်း လက်ခံပြီး သူတို့ချက်လျင်လည်း ကောင်းမွန်စွာ ပြန်ဖြေပေးတတ်ပါတယ် တစ်ခါတစ်လေ တစ်ချုို့သူများရဲ့မေးခွန်းကြောင့် ကျွန်တော်စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်ရပါသည် ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတာ တော်တော်လေးစဉ်းစားရပါတယ်။ဥပမာ။ ။...
ရင်ခတ် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့
ရင်ခတ်။ ။ကျွန်တော် ရင်ခတ်နွယ်ပါ
နွယ်လေး။ ။ရင်ခတ်နွယ် ဟုတ်လား?
ဘယ်က ရင်ခတ်နွယ်လည်း? ထိုမေးခွန်းသည် သူများတွေအတွက်တော့ ကျွန်တော်မသိပါ ကျွန်တော်အတွက် တစ်ကယ်ကိုပြန်မဖြေချင်သောမေးခွန်းပါ စိတ်ကသိကအောက်လည်းဖြစ်ရပါသည်။ထိုသို့မေးလာလျင် ကျွန်တော်က ကိုရီးယားမင်းသား ရိန်းနဲ့တူတဲ့ ရင်ခတ်နွယ် ပါလို့ပြန်ပြောရင် ရောသိနိုင်ပါ့မလား?အရင်ကတောင်ဒဂုံမှာ နေတယ် အခုအိမ်လခမပေးနိုင်တော့လို့ တောင်ဂျပန်မှာ သွားနေနေတဲ့ ရင်ခတ်နွယ်ပါလို့ ပြောရင် ရောသိနိုင်ပါ့မလား? သူသိနိုင်မယ်ဆိုရင် ဖြေရတာတော်ပါသေးသည်။ထိုမေးခွန်းမျုိုးမေးလာသောအခါတွင် မဆီမဆိုင် ကျွန်တော် သူငယ်ချင်း ကိုပါကြီးနှင့်သူ့အဖေ ကိုကျော်ဇံကိုသွားသတိရမိပါသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် အရေးခင်းကာလတွင် မိမိတို့ရပ်ကွက် လုံခြုံရေးနှင့် လမ်းများလုံခြုံရေးအတွက် မိမိတို့လမ်းအလိုက် ညဖက်လုံခြုံရေးကင်းစောင့်ရပါသည်။ထိုည ကင်းကြသူများသည် မိမိတို့လမ်းသားများသိနိုင်သော စကားဝှက်တစ်ခုထား၍ လမ်းထိပ် ဂိတ်တံခါးမှ ကင်းတာဝန်ကျ သူများက စကားဝှက်ကိုမေးကာ အ၀င်အထွက် ပြုလုပ်ခွင့်ပေးပါသည်။တစ်ညတွင် ကိုပါကြီးနှင့် လမ်းလူငယ်လူကြီးများ ညဖက်ကင်းကျသည့် အချိန်တွင် ဂိတ်တံခါးကို လူတစ်ယောက်လာနေသည်ကို ကိုပါကြီးကတွေ့သဖြင့် လေးခွနှင့် လှမ်းချိန်ကာ....
ကိုပါကြီး။ ။ဟေ့ ရပ်၊ အဲ့ဒီနေရာမှာတင် ရပ်နေ၊
ဘယ်သူလည်း? မရပ်ရင် လေးခွနဲ့ပစ်လိုက်မယ်။
လူတစ်ယောက်။ ။ စကားဝါပါ
ကိုပါကြီး။ ။စကားဝှက်တော့ မှန်တယ်
နာမည်ပြော ဘယ်သူလည်း ?
လူတစ်ယောက်။ ။ကျွန်တော် ကျော်ဇံပါ
ကိုပါကြီး။ ။မကြားရဘူး ကြာဇံလား? ကျော်ဇံလား?
ကိုပါကြီး။ ။ ကျော်ဇံဟုတ်လား? ၊ ဘယ်ကကျော်ဇံလည်း?
ထိုသူသည် ကိုပါကြီးရဲ့ စကားသံကို ကျက်မိ (မှတ်မိ )လာသောအခါ အလွန်စိတ်တိုကာ အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဒီမှာ ပါကြီးရေ ဘယ်ကကျော်ဇံလည်းဆိုတော့ဟေ့ မင်းအမေလင်မတင်နွဲ့ယောက်ကျား မင်းအဖေကျော်ဇံဟေ့ ၊ မင်းအဖေကျော်ဇံကွ။
ကျွန်တော်လည်း နောင်အခါ ဘယ်ကရင်ခတ်နွယ်လည်း? လို့မေးလာလျင် ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမည်ဆိုတာကို တွေးရင်း တွေးရင်းဖြင့်..........။
Posted by ရင်ခတ်နွယ် at 11:13 PM2comments:
ရင်ခတ်နွယ် ဆိုတာ ဒါပါပဲ
အချစ်ကို လေးနက်စွာနဲ့ တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးချင်သူ...။ "အချစ်ရဲ့သစ္စာတရားမှာ အကြောင်းပြချက်ဆိုတာ လုံးဝမရှိဘူးလို့ လက်ခံတဲ့သူ" အခုတော့လည်း... အဲ့ဒီသစ္စာတ၇ားကြားမှာ အမှတ်မထင်လွတ်ကျခဲ့တဲ့ နှလုံးသားအပိုင်းအစများကို လိုက်ကောက်နေသူ....။။
ပြန်လည်နိုးထသောနေ့ - မထင်မှတ်ပဲ ဘလော့ ပြန်လည်ဖွင့်လို့ရပါပြီ။ နည်းလမ်းရှာဖွေပေးပါသော မမေဟန် နှင့် အန်တီသစ္စာအလင်း တို့ ကျေးဇူးကြောင့်ပါ။ အရင်က ဘလော့ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေး တစ်ခု...
NLD နှင့် ILO အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ အား သင်တန်းပေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေး မှု -
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွှေးနေ့ကျင်းပ - ယုန်ကလေး ၂၂၊၆၊ ၂၀၁၁ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့မှာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ (၆၆) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အခမ်းအနားကို အခုလ (၁၉)ရက်နေ...
မြန်မာပြည်ကိုကွယ် လွမ်းတယ် - ရင်ဂို ဆိုထားတဲ့ ပြည်တော်ပြန် ပလေးဘွိုင် ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ရှာနေတာကြာပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ youtube မှာတွေ့တာနဲ့ တင်လိုက်တာပါ။ အဝေးရောက် မြန်မာတွေအတွက် အလွမ်းေ...
- ကောင်းကင်များ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၂၀၁၀